Siyakuhalalisela ngo-Mashi 8, 2018: Mfushane, enhle, sihalalisela ngokusemthethweni ngamagama ngo-Mashi 8, 2018 evesini, ukulandelela abesifazane
Ngeliholide ka-Mashi 8, kuyisiko ukuhalalisela bonke abesifazane abajwayele. Isibonelo, ozakwabo emsebenzini bangabhala izifiso ezinhle ezisemthethweni ezivela kumphathi, abasebenzi besilisa. Umngane wami othandekayo, intombazane nomfazi bayothokoza ukuthokoza. Bangathatha uhlobo lwezinkondlo noma i-prose. Izifiso ezincane zamagama ziqinisekile ukujabulisa umamukeli futhi zimnike imizwelo enomusa kakhulu. Thola ukuhalalisela okuhle ngo-Mashi 8, 2018 ngendodakazi, umfazi nabesifazane abahle nje abafundi bethu bazosiza izibonelo ezikhethiwe. Zingathunyelwa kumanethiwekhi omphakathi, izithunywa ezisheshayo, i-SMS. Uma befisa, bangakwazi ukwesekwa ngezithombe ezithintekayo namakhadikhadi.
Kancane ukuhalalisela ngoMashi 8, 2018 ngegama
Noma yimuphi owesifazane uzojabula ukufundela igama lakhe ukubingelela. Phela, ngale ndlela, uzothatha ukunakwa kakhulu kumngane wakhe noma othandekayo, osebenza nabo noma umngane. Kubafundi bethu, sithole amahle amancane sihalalisela ngamagama ngo-Mashi 8, 2018. Sincoma ukuzithumela kudadewethu, umngane noma intombi yakho, umkakho.
Ukumemezela okuhle ukuhalalisela ngabesifazane ngo-Mashi 8, 2018
Gcwalisa uqobo ukuhalalisela ngezithombe ezinhle, amakhadikhadi noma izifiso ngamagama akho. Isibonelo, ungabathumela kanye nesithombe, lapho igama lomamukeli libhalwa ngemibala. Lesi sibonakaliso sokunakekelwa ngokuqinisekile sizojabulisa bonke abesifazana futhi simbonise ukuthi uyabaluleke kangakanani nokuthi abangane bakhe nabangani bayamthanda kanjani. Ku-Anna: Vula amafasitela evulekile namhlanje, Futhi umoya ophefumula ophefumulayo. Anna, lindele ukuhalalisela kanye nezimangaliso zanamuhla, nguwe kuphela ozokwenza ukuthi sizinikeze iholidi lonke.
Sifisa injabulo yowesifazane, enkulu, Futhi ukumanga kusuka othandekayo wakhe oshisayo negolide. Ngo-Mashi 8 ake ujabule ngezipho, Masibe ziqhakazile futhi zikhanyise kakhulu.
KuCatherine: Katyusha, mnandi futhi omuhle, Sifuna ukuhalalisela, Ukubusisa wonke umuntu ngenjabulo! Futhi ukuze siphumelele, Sisebusuku olushisa kakhulu. Usuku Lwabesifazane Ojabulayo, intombazane enhle! Yiba nokukhanya, kwelanga nokukhala.
KuDaria: Izimbali ziyaqhakaza, ama-lilacs akhula Ngosuku oluhle kangaka olufudumele. Namuhla iholide yamantombazane, Futhi ngiyajabula ukukuhalalisela.
Ngifisa ukuba ungazi izinyembezi futhi ungalokothi ulahlekelwe yintliziyo. Impilo eqinile kuwe, konke okusemandleni ekugcineni.
Ngifisa wena, Daria, iminyaka eminingi ukuhlala nawe, engazi lutho olubi. Vumela abangane bami bahlangane, Futhi ngizozibala!
Ku-Irina: Ngifisa ukuqoqa izithelo zothando kuwe, Kukhona njalo isimangaliso njalo ekugcineni kwakho. Futhi ngosuku luka-Mashi 8 ngamaphiko ngiyahamba Ngiyahalalisela ngabanye Ngifuna ukukutshela.
I-charm kakhulu! Isi-Irish, uhle kakhulu, umphefumulo wakho uhle, akukho ukudonsa okubi kulo. Vumela i-emerald ngayinye ibe yi-emerald yakho empilweni, Impumelelo ibe yikhanya, ngifisa konke okuhle.
Ku-Xenia: Ngikuthumelela imikhonzo Kuleli holide, uSuku Lwabesifazane, Ilanga elifudumele lifudumele Kuwe, likhula lilac. Izipho zakho kanye nezimbali, namazwi, Ilanga malangale ngokukhanya, Futhi udizizi ngenjabulo nenjabulo, Yini ezofika kuwe entwasahlobo, Ekude kuyoshiya isimo sezulu esibi, Kusuka kithi, Xenia, nawe!
Siyahalalisela amavesi emavesini kusukela ngo-Mashi 8, 2018 kubesifazane - ukukhethwa kwemibhalo emifushane
Izinkondlo ezimfushane mayelana nabesifazane kanye neholide ka-Mashi 8 zikhulu ngokuthumela kubangani, izihlobo kanye nozakwabo. Bangakwazi ukukhuluma ngobuhle besifazane noma ubungane. Ukuhalalisela okufushane nokumnandi kuhlanganisa izifiso eziqotho kuphela. Ukuthumela amatheksthi amancane esincoma ngawo ngezithombe ezithintekayo namakhadikhadi. Bazosiza ukuqedela ukuhalalisela ngoMashi 8, 2018 emavesini abesifazane besebenza kuqala.
Ukukhethwa kwamavesi amancane amahle ngokuhalalisela abesifazane beseholide ka-Mashi 8, 2018
Ukuthatha amavesi amancane ngokuhalalisela abesifazane abajwayele abafundi bethu bazosizwa ngokukhethwa kwamathekisthi. Ihlanganisa izifiso ezithandekayo nezithinta kakhulu, ezingase zenziwe ngegama lakho siqu. Izinkondlo zangempela zifanele ukuthumela ezithunywa ezisheshayo, amanethiwekhi omphakathi noma ama-sms. Usuku olumnandi lwafika ngonyaka, Wasiletha: ukufudumala, intwasahlobo, Ukumomotheka, injabulo, imizwa, Nabafazi bethu - siyakuhalalisela!
Sifisa sengathi uzomomotheka, Ekusentwasahlobo uzokujabulela, Ukuhlaselwa: olwandle ngamazwi abumnene Futhi izimbali ezihle kakhulu!
Intwasahlobo ihlabelela, izimbali ziyaqhakaza ... Konke lokhu kukukwenza uhleke. Isikhathi sokuqala ukukhula, Usuku lwakho lufikile - Mashi 8th.
Ngifisa ukuhlala kuwe ujabule, Ngempumelelo, othandekayo ngobuqotho. Vumela usuku ngalunye lube neZipho ku-destiny!
Ngalolu suku oluhle losahlobo ngifuna ukukuthumelela! Vumela indlu igcwale imfudumalo, Uthando, ukwethembeka, ubuhle. Vumela ubuhle bakho buqhakaze, Ukuzinza kuzokuvumela imali engenayo. Vumela izwe elizungezile lilethe injabulo, Vumela injabulo ingalahlekelwa ubumnandi bayo, Vumela wonke umuntu abukeke ngokumangalisa. Futhi wamukele ukuhalalisela!
Ngosuku olumnandi losaziwayo ngifisa wena okuhle, Uthando nokuphefumulelwa, Ukuba impilo yezinganekwane.
Ukufakazela okushisayo, Okumomotheka nemibala, Amamaki amagama amaningi awakhanyayo futhi anomusa kuphela.
Vumela ilanga likhanye, Ungagcini izinyoni zezinyoni, Makuze kwenzeke isimangaliso ngalolu suku!
Ngikuhalalisela ngenhliziyo - Vumela amaphupho agcwaliseke, Izinyoni mazizikhukhule, nezimbali ziqhakaze nxazonke.
Vumela isimo esinjalo Ungashiyi unyaka wonke, Ukuhlonishwa Kwangathi kanye nenjabulo Usuku olusha lukuletha.
Ufisa ukuhlala Ukhazimulayo futhi uqhakazile, u-Admire, umangale, Thatha izipho ezizayo!
Ukuhalalisela okufushane ku-prose kusukela ngo-Mashi 8, 2018 - izibonelo zamatheksthi ngamagama abo
I-prose encane emazwini akho iyathokozisa kakhulu, okulotshwe enhliziyweni. Ngakho-ke, kumngane othandekayo, intombazane, umama noma indodakazi, kufanele ubhale umbhalo othinta inhliziyo nomusa ngo-8 Mashi. Ukwenza izifiso ezinhle kakhulu, sikhethe izibonelo kubafundi bethu. Bayosiza ukubhalela ukuhalalisela okufushane ngesikhathi se-prose yeholidi ka-Mashi 8 kalula futhi kalula.
Izibonelo ze-prose emfushane ngokuhalalisela ngamazwi abo ngabesifazane ngokuhlonishwa kuka-Mashi 8, 2018
Ekuhlanganiseni kwethu okulandelayo, abafundi bazokwazi ukufunda ukuthokozisa okuthakazelisayo nakakhulu ngokuhlonipha ngo-8 Mashi. I-prose ekulungele ingasetshenziswa njengesisekelo. Futhi ungakwazi ukulungisa ngokuphelele, usebenzisa izingxenye zemisho kuphela noma umqondo oyinhloko wombhalo. Siyakuhalalisela ngamazwi akho kuzohambisana kokubili nokuthumela nokugcwalisa amakhadi ezitolo. Siyakuhalalisela ngoSuku Lwabesifazane LwaseMhlabeni Wonke nasemphefumulweni ngikufisa ukuba ukhulule amaphiko ngemuva kwakho, uthando olukhulu nenjabulo evulekile empilweni. Ake ungashiyi umuzwa wokuzethemba, umuzwa wobuhle nesifiso sokuwina njalo. Ngifisa ukuthandwa futhi njalo ngimnandi kakhulu.
Namuhla liholide elihle kakhulu lezentwasahlobo - usuku lwabesifazane emhlabeni wonke! Ngikuhalalisela nina besifazane abathandekayo! Ngifisa wena injabulo engavamile, ubusha obungunaphakade, ubuhle obungacacile kanye nempilo yaseSiberia! Yiba yimpumelelo, ozimele futhi ohlakaniphile!
Ngikuhalalisela ngeSuku Lwabesifazane Lamazwe Kazwelonke futhi ngifisa ngobuqotho ukuhamba ngomoya okhululekile ukugwinya ngomoya wokujabula nenjabulo, usuku nosuku luqhakaza futhi ugcwalise leli zwe ngephunga elimnandi nobuhle, ungalokothi uqaphele futhi njalo wenze lokho okuthandayo ngempela.
Madoda othandekayo, Siyakuhalalisela ngoSuku Lwabesifazane LwaseMhlabeni Wonke! Sifisa ukwenza isimo sethu sezulu siphume njalo, simomotheka ukuze sigweme ilanga. Jabulela ukuphila njengezinyoni futhi ujabule njengezingane. Yiba iholide enhle futhi enempilo, ejabulisayo!
Amantombazane adorable! Ngikuhalalisela ngosuku lwama-international wesifazane! Kulolu suku lukaMashi, ngingathanda ukufisa izinsuku zakho ezishisayo, ukumomotheka okufudumele, izenzo ezinhle namazwi aqotho. Vumela inyoni yenjabulo ingene endlini wonke umama, ugogo, intombazane, owesifazane, indodakazi futhi uhlale lapho unomphela.
Ukuhalalisela okusemthethweni ngokulandelana kusukela ngo-Mashi 8 kuya osebenza nabo - ukukhethwa kwezifiso ezinhle
Osebenza nabo besifazane wamukelwa ngosuku lukaMashi 8 ukuhalalisela ngezethulo ezincane. Kodwa umholi kumele futhi akhulume phambi kwabo. Ukunakekelwa okukhokhelwe kuyoba mnandi isisebenzi ngasinye sokuqoqa. Ngokuyinhloko, uma inkulumo yokuhalalisela izobizwa ngumuntu ophethe isikhulu. Ukuze uthole okuhle nenjabulo, impumelelo, uthando kanye nempilo enhle, i-prose encane iphelele. Kuzoveza konke ngokufushane futhi ngesikhathi esifanayo kahle. Khetha ukuhalalisela okusemthethweni ngomsebenzi we-prose ukuthi ozakwabo beholide ka-Mashi 8 kungaba phakathi kwezibonelo esizikhethile.
Ukukhethwa okusemthethweni ngokubambisana kwabalingani besifazane ngokuhlonishwa kukaMashi 8, 2018
Ukuncoma okusemthethweni kufanele kufaka phakathi izifiso ezijwayelekile, nezifiso zomsebenzi ophumelelayo, injabulo emkhayeni womndeni noma othandweni. Ukuhalalisela okunjalo kuzokwazi ukuveza inhlonipho nokubonga ngokugcwele kumuntu ngamunye osebenza naye wesifazane. Sizokwazi ukuthokoza ngokusemthethweni abasebenzi kulazi zibonelo ezilandelayo. Bangasebenzisa futhi njengesizathu sokubhala umlayezo omusha wokubingelela. Ozakwethu abathandekayo, othandekayo, abesifazane abathandekayo, siyanihalalisela ngoMashi ka-8! Vumela njalo ube nemimoya ephakeme yasentwasahlobo. Ukuqhakaza, ukugqugquzela amandla, ukuhogela ngesisa, sicela ubuhle nomusa. Uphelele! Ukuphumelela kuwe, uthando, induduzo nokuchuma!
Namuhla, amaconsi amemeza ngenjabulo, futhi entwasahlobo iyaqina ngokwengeziwe emalungelweni alo angokomthetho. Abesifazane abathandekayo, amantombazane, osebenza nabo, kusukela ngo-8 Mashi! Hlalani nilungele ukuguqulwa, vuselela ukuthanda kwakho kwabantu, ukugijimela ezinhliziyweni, ukunqoba injabulo, ukuhogela njengezimbali, kufinyelele emagagasi empumelelo. Vumela amehlo avele, ukuzimela kanye namandla okuhamba, ukuphazamiseka kokuzethemba. Dumisa ama-odes ngobuhle ekuhloniphekeni kwakho, ukukhuleka nokufudumala!
Bathandekayo bami abathandekayo, abesifazane abathandekayo nabathandekayo, ngiyanihalalisela ngo-8 Mashi futhi kusukela phansi kwenhliziyo yami ngifisa ukufisa ukuba njalo izisebenzi eziphambili, izingcweti ezimangalisayo, izakhamuzi zangempela, izindlukazi ezinhle kanye ne-divas emangalisayo. Vumela zonke izifiso zakho zigcwaliseke, vumela abesifazane abanjalo abanamandla futhi abanenjongo njengoba uphatha konke futhi njalo.
Ozakwethu abathandekayo, siyakuhalalisela eholidini lentwasahlobo, vumela usuku lwekhalenda entwasahlobo lulethela injabulo endlini yakho futhi ungalokothi ushiye futhi. Sifisa ukuthi abantu bayakwazisa ukunakekelwa nokuthandana kwakho, bakunike izimbali bese bethi amazwi amnandi.
Ngiyathanda amantombazane amancane! Sisebenze eqenjini lamanzi iminyaka eminingi, futhi kuyadabukisa ukuthi thina besilisa sasikutshele ukuthi ungowesifazane, uhlwengile futhi uyamangalisa. Namuhla, kwiSuku Lwabesifazane LwaseMhlabeni Wonke, ngibonga bonke abantu, ngifisa ukuhalalisela ngeholidi lakho, ngifisa ukuba ugcine yonke impilo yakho, ubuhle nenhle. Siyabonga, amantombazane, kodwa lokho kwenza impilo yethu kanye nathi sibe ngcono futhi sijabule.
Ukuthinta ukuhalalisela ngo-Mashi 8, 2018 intombazane yakho ethandekayo, isifiso somfazi ngegama
Ukuze ujabulise umkakho nentombazane yakho ethandekayo, abafundi bethu bazosizwa izibonelo zezinkondlo ezithintekayo nezithandekayo. Kuzo, abesifazane bazokwazi ukufunda ngemizwa eqotho ehlangene namadoda abo. Funda ngendlela enhle futhi ehlakaniphile ngayo. Siphakamisa futhi ukuqedela amavesi alungiselelwe ngamazwi akho. Bese uhalalisela ngoMashi 8, 2018 njengabathandekayo bakho ngisho nangaphezulu.
Ukuthinta uqobo lwakho umkakho othandekayo, intombazane eholidini ngo-Mashi 8, 2018
Kumfazi nomntombazane wethu ongcono kakhulu, abafundi bethu bangakhetha ukuthokoza okukhulu ngo-Mashi 8 phakathi kwezibonelo ezilandelayo. Kuhle kakhulu ukuthunyelwa. Futhi ingasetshenziswa ukugcwalisa amakhadikhadi. KuKarina: Kukhona isithombe esikhanyayo Ekugcineni efasiteleni. Uqaphele, uKarina, Green nxazonke?
Le Mashi yafika, i-Prankster, Blossom nxazonke, Wasiletha Usuku lwabesifazane, Sihalalisela abangane bakho maduzane.
Yebo, ngifisa wena kuphela injabulo ezulwini, Futhi ngithembisa, Izimangaliso eziningi ezimnandi!
Ku-Elena: Vumela izinsuku zigijime, zilethe iholide kuphela. Ungumuntu omnene, ongavamile, ovuthayo. Ngiyashesha ngo-Mashi 8, Mina, Elena, ngikhumbuze ukuthi ungavamile.
Futhi ngifuna ukuthanda uthando elishisayo. Qaphela, ungahlanganyeli nenhlanhla! Vumela injabulo ikuzungeze yonke indawo, Ukubhujiswa makuvumele kuphela ukuphumelela.
KuVictoria: Ukuqaphela, ukunakekela, ukushisekela, Awunikhaphela futhi ungakhohlisi, Uzohlala uhlala uqinisile, Ukufudumala nokukhanya okulula.
Siyakuhalalisela ngoMashi 8! Kuze kube yilolu suku - ngaphandle kokumemeza ... Siyakwamukela ngothando nangothando. Ungu-best, Vika!
Vumela inhlanhla ihambe. Ubuhle bakho obuhehayo, Sithinte sonke ngokubukeka okujabulisayo Futhi ulandele iphupho ngokuziqhenya.
Ku-Anastasia: Unesibindi, uhlakaniphile futhi uthembisa, empilweni usebenza ngokwanele. Kodwa wena u-Nastya, futhi uyathandeka, Futhi uvame ukuhlala emafwini.
Sifisa ukuthi amaphupho azaliseke. Wonke umuntu wayemangala ngalokhu. Vumela uMashi 8 uqale unikeze - Injabulo empilweni yakhe iyomletha.
Ku-Alexandra: Alexandra, othandekayo, Siyakuhalalisela ngoSuku Lwabesifazane! Ngiyajabula ukuthi ngiyakwazi, ngifuna ukuba nawe. Izinwele zakho zinhle, Futhi amehlo akho amnandi, Okuhle kunakho konke - kuyacaca, Phikisana nalokhu, kahle, nganoma iyiphi indlela. U-Alexandra, darling, ngifisa sengathi inhliziyo yami yonke injabulo, umuntu ongenawo onqenqemeni, Ungadabuki nhlobo!
Ukuhalalisela kwangempela ngo-Mashi 8, 2018 kubalingani - izinkondlo ngabesifazane ngamagama
Abangane bezakwabo eholidini likaMashi 8 bangabongiswa hhayi kuphela ekusetshenzisweni okusemthethweni, kodwa nangezinkondlo ezinhle ngamagama abo. Izifiso ezingavamile ziqinisekile ukujabulisa bonke abamukeli. Ungabathumela kanye nezithombe ngezimbali, izinkondlo noma izilwane ezinhle. Ungabathumela futhi izitifiketi eziphathekayo noma ukumomotheka. Ngosizo lwabo, ungakwazi ukuhalalisela ngo-Mashi 8, 2018 kubangani abangabangane nabo abathandekayo futhi basebenzisekile.
Izinkondlo zangempela nezifiso zabalingani bozakwethu ngegama ngoMashi 8, 2018
Abafundi bethu bazokwazi ukuhalalisela ngamagama wabalingani babo besebenzisa izibonelo ngezansi. Bayobasiza kahle futhi bepholile behalalisela bonke osebenza nabo futhi bafisa konke okusemandleni abo. Ku-Veronica: Igama lakho lisho ukuthi wena uyisisulu. Qaphela njalo, Njengelanga, nasemvula, u-Veronica, uhle futhi uhlale unobungane. Vumela isibhakabhaka sibe sobala, Ungadabuki kuze kube phakade. Ngosuku oluqhakazile, ngoMashi 8 Sihalalisele bonke abesifazane. Ngizosho: phila ngokucebile, Kwangathi impumelelo ingahamba nayo!
U-Alice: Othandekayo wami, Alice, Namuhla iholidi - Usuku Lwabesifazane, Ngomomotheka ubukeka emuva, Izimbali zikhula, amaconsi. Yiqiniso, ubusika bekude, kodwa ekugcineni, washiya, Ngakho-ke ukuze ngingabhale phansi ize, ngizosho ukuthi: Ngiyabonga ngokuza, Wafika empilweni yami inaudible, Ngiye ngaphawula konke okuzungezile, Futhi kimi akukho njabulo ephakeme kunalokho okufanele ube nakho bobabili!
KuTatiana: Uhle futhi unomoya omnene, Tatiana, omuhle futhi omuhle, engenamaphutha. Ukumomotheka kwakho, njengelanga, kuyashisa. Lapho ususeduze, enhliziyweni kakade ifudumele.
Ngo-Mashi 8, sinikeza izimbali, Ukuze sihlale sijabule, Amadoda ukuguqa, Abamemezeli baqala ukugcwalisa.
Vumela leli phofu libe yilo elikhanyayo, Impumelelo iyoba yedwa futhi ibonakale. Futhi wena, Tatiana, ujabulele impilo yakho. Ngothando, othandekayo, swim ngekhanda lakho.
Ku-Olga: Ngo-Mashi 8 usuku olukhanyayo futhi olunomusa, ngizobeka ukubonakala kwami ​​kwangaphandle ngokuhlelekile, ngizokuhalalisela, Olya, ngifuna ukukufisa kakhulu.
Ngifisa wena injabulo - inkanyezi, njengebhakabhaka, Ukuphila okuhle, ngenjabulo nangesinkwa. Uthando luhlangene, luqotho, lunhle, Ukwenza izinsuku zigijime futhi ngoma ingoma.
KuJulia : Wena, Yulechka, njengobuhle obuhle - Ukuthakazelisa, ubumnene, u-cutie. Ngikuhalalisela ngezimbali namuhla, ngifisa sengathi uthanda ngo-Mashi 8.
Ukuqaphela kusuka kumadoda, Ukuba nekhulu ngalesi sizathu. Injabulo, vumela indlela ehamba ngayo yonke indawo, Ngabe ihamba ngenomoya efudumele.
Ukuhalalisela kakhulu indodakazi yakho ethandekayo ngoMashi 8, 2018 - ukukhethwa kwezinkondlo
Indodakazi ethandekayo ngosuku luka-Mashi 8, upapa kufanele ahalaliswe omunye wabokuqala. Ngempela, kuye, uyohlala eqina kakhulu futhi ehlakaniphile kakhulu. Ukukhetha ukuhalalisela okuhle nokuthinta kusukela ngo-Mashi 8, 2018 indodakazi yethu izokwazi phakathi kwezibonelo zazo ezilandelayo. Zifanele ukuthumela abasha kanye namadodakazi asekhulile.
Ukukhethwa kwemikhonzo engcono kakhulu evesini yendodakazi yakho ethandekayo ngo-Mashi 8, 2018
Phakathi kwezinkondlo ezakhethwa thina emadodakazini zingatholwa ukuhalalisela kwangempela futhi okuthinta iholide ngo-Mashi 8. Zonke zifaka phakathi izifiso eziqotho nezomusa. Kusukela ngo-Mashi 8, ndodakazi yami, My flower flower. Vumela iphupho lisondele. Isinyathelo esisodwa.
Vumela umfudlana wasentwasahlobo Funa injabulo, Ngakho-ke akukho ndawo yokudabuka.
Njenga ilanga entwasahlobo, Vumela uthando lufudumele. Umusa, ake inhliziyo yakho ikhule.
Jabulela, futhi inhliziyo yami iyojabula. Ngiyakuthanda kakhulu, ngizohlala ngihlala khona.
Ngomhlaka wesishiyagalombili kaKhisimusi ukumomotheka, Futhi, njenge-rose, iqhuma, Kuyinto enhle kakhulu kulobu philo! Amaphupho agcwaliseka!
Akusekho amahle emhlabeni wezimbali, Yazi ukuthi umane uhamba phambili! Ngikufisela iholidi elijabulisayo, ndodakazi yami, Ukuze uphumelele nxazonke!
Injabulo, injabulo, injabulo futhi ngifisa wena! Jabulela futhi uphumelele, Indodakazi yami ethandekayo.
Ukuhleka, injabulo, ukumamatheka Futhi uthando olungenalutho, Ukuze ube nomyeni wakho Inhliziyo eyodwa kokubili!
Ekhaya ukuze ube njalo inkosikazi, Futhi inkosikazi yekusasa, Ngo-Mashi 8, u-hare! Yazi ukuthi nginani njalo.
Indodakazi yami ethandekayo, ngosuku lwabesifazane, ngiyakuhalalisela, othandekayo, okusemandleni akho kimi, owuthandekayo kakhulu, Jabulela njalo, ujabule Futhi uphumelele impumelelo, Vumela izindaba, Injabulo, injabulo nokuhleka kube kuhle!
Ngosuku lwesifazane, yamukela namhlanje, Ndodakazi, ngiyakuhalalisela. Ngifisa wena injabulo futhi ungabazi ukungabaza.
Umuntu makabe eseduze no-Strong futhi kufanelekile. Ngakho ukuthi ngaso sonke isikhathi wena naye ube nokuthula nokuzola.
Ngakho konke kuhamba kahle ebhizinisini, uBedou, ukuze ungazi. Ngonyaka ngamunye odlule waba mnandi futhi waqhakaza.
Ngiyahalalisela ngomngane ngo-Mashi 8, 2018 umngane - ukukhethwa kwezinkondlo nama-postcard video
Umngane osondelene naye, obhekene naye izimo eziningi zokuphila, kufanele nakanjani ahalaliswe ngoMashi ka-8. Ngemuva kokuba ubungane obuqinile nomfazi oqotho nomusa kungabhekwa njengesipho sangempela. Ulungele ukusiza nganoma yisiphi isikhathi. Futhi njalo ungaphendukela kuye ukuze uthole iseluleko esiwusizo nesibalulekile. Ukuze ukhethe ukuhalalisela amavesi emahoreni we-holide ka-Mashi 8 kumngane othandekayo kungenzeka phakathi kwezinhlobonhlobo ezikhethwe thina. Bafanele ukuthumela futhi nje umngane omuhle.
Ukukhethwa kwezinkondlo ezihlekisayo ngokuhalalisela umngane ngeholidi ka-Mashi 8, 2018
Esikhethweni sethu esilandelayo sezinkondlo ezihlekisayo ungathola ukuthokoza okuningi kwezintombi zakho eziyizintandokazi. Yonke imibhalo ihlanganisa izifiso zomusa neziqotho, okuyinto abamukelayo ngokuqinisekile bayothanda. Zingabuye zenziwe ngezifiso zabo ngamagama abo, amazwi othintekayo okukhuthazayo noma amazwi okubonga. Sincoma ukuthi uthumele izinkondlo zokubonga izintombi ngezithombe zangempela noma amakhadikhadi. Idalwe ngosuku luka-Mashi 8, Lokho amaphupho agcwaliseka. Vumela konke okuphilayo kulandelwe, Kuphela njengoba ufuna.
Ukuze imali ingapheli, Ukuthengwa kwakungukuthi nsuku zonke, Ukugcina ukwesekwa Empilo yabangane abaningi.
Vumela la madoda ahlanganise izinyawo zakho. Vumela njalo ube nokholo, injabulo nothando!
Ngomhlaka lwesishiyagalombili kaMashi, usuku lwentwasahlobo, ngifisa sengathi ilanga, ukuvuselelwa, Ukumamatheka, amakhulu okuncoma, Ukuphila ukuhlala ngamaphesenti angu-100.
Ngakho lokho ezandleni zomuntu othandekayo, Ukuze uhlale ujabule. Futhi akeke, intombi, ugqozi Ukuhlobisa yonke imizuzu.
Ngo-Mashi 8 usuku oluhle. Wena, mngane, sihalalisela! Futhi emhlabeni akukho okuhle kakhulu kuwe, ngikufisela kuphela injabulo.
Konke eholidini ngezimbali zakho, Yithanda njalo, othandekayo. Mabavumele bonke baphuphe amaphupho, ukuhlonipha nokushisa ngaphandle kokuqothula!
Intombi, siyakuhalalisela ngoSuku lwabesifazane. Sebenzisa lolu suku ngamaphesenti angukhulu: Yiba indlovukazi futhi uvutha umlilo Kusukela ekunconyweni kwethenda yezigidi.
Zizwa amandla obuhle besifazane. Bathandekayo, yibani kuphela, oyifunayo. Futhi lokho kumuntu wakho wena Phakade kwahlala kubaluleke kakhulu!
Mngane othandekayo, nge-8 ka-Mashi, ngicela ngikuhalalisele ngenhliziyo yami yonke ngothando, ngifisa ukuba nonke "abafudumele" enhliziyweni yami, angifuni ukukubingelela ngezinsizi nezinhlungu, futhi ngingahle ngikuvumele ukuba ngihambe ngiqhubeke nokuhamba, empilweni, ungadabuki, , njenge-rose, i-lily yesigodi, i-peony, Ukuze umfana, noma ubani, abe nesithandwa nawe, Ukuze amaphupho agcwaliseke, Futhi ujabule empilweni, ube njalo!
Amakhadi wevidiyo kumngane ohloniphe leli holide ngoMashi 8, 2018 ngokuhalalisela
Siyakuhalalisela abangane bakho abaseduze nje kuphela izinkondlo ezinhle noma izithombe, kodwa futhi namakhadi wevidiyo. Izifiso ezijabulisayo ngomculo, izingoma nemidwebo kuzosiza ngosuku luka-Mashi 8, 2018 ukunikeza owesifazane ngamunye amandla amaningi. Amakhadi anemifanekiso anconywa ukuthumela kumanethiwekhi omphakathi noma ama-mms. Ukuze uthole ukuhalalisela okuthinta inhliziyo nokuthandekayo ngo-Mashi 8, 2018 ngentombazane yethu, intombazane, umfazi, abafundi bethu bangaba phakathi kwezibonelo ezinhle kakhulu zezinkondlo kanye ne-prose. Lezi kungaba izifiso zomuntu siqu noma ezijwayelekile. Ukwamukela ukuhalalisela okuhle osebenza nabo besifazane kungabuye kube ngegama usebenzisa izibonelo zethu. Futhi bangabhala i-prose enhle esemthethweni. Ukuhalalisela kwangempela nokuhleka kuzokujabulisa umngane oseduze, uma kubhalwe ngamazwi abo. Futhi amakhadi ethu evidiyo anezithombe ezithandekayo azosiza ukummangaza.
Isipho sokuqala sika-Mashi 8, izandla zami kumama nogogo - kusukela ephepheni nasendwangu - esikoleni, enkulisa - Isipho esihle ku-Mashi 8 ngezandla zami siqu amaswidi
Ukuhalalisela okuhle futhi okufushane ngo-Mashi 8 ngabalingani nabesifazane nezintombi - ku-sms, prose, izinkondlo, izithombe - Izibonelo zokubonga okufushane nokuhle ngo-Mashi 8 ngamagama akho
Burrito namazambane agcwalisa
Ukubuyiselwa kombala wezinwele
Ugoqa uju nesinaphi
Ama-truffles anemivuthu ye-almond
Ubudlelwano nomyeni wangaphambili ngemuva kokuhlukanisa
I-LCN ne-Mercedes: isiqephu sama-giants amabili
Ithanga elibilisiwe nge-millet